उपेन्द्रको जसपामा राज : महन्थको पुर्पुरोमा हात ! - Kantipath.com
उपेन्द्रको जसपामा राज : महन्थको पुर्पुरोमा हात !
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुंग्याएको छ । आयोगको सोमबार बसेको इजलासले जसपाका ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यहरुको ‘हेड काउन्ट’ गर्दा बहुमत पुगेको भन्दै यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिक मान्यता दिएर महन्थ पक्षलाई अर्को पार्टी गठन गर्न बाटो खुला गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगको हेडकाउन्टमा जसपाका ५१ कार्यकारीणी सदस्यहरुमध्ये उपेन्द्रको पक्षमा ३६ र महन्थको पक्षमा १६ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगले यादवको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । फैसलामा अल्पमतमा परेको ठाकुर पक्षलाई कानुन अनुसार नयाँ नामको पार्टी गठन गर्न भनिएको छ ।
पार्टी दर्ता गरेर नयाँ पार्टी जन्माइसकेपछि उपेन्द्र यादव पक्षले सांसदहरुलाई नयाँ पार्टी नजाऔ, गयौं भने कारवाही हुन सक्छ भनेर सचेत गराउन सक्छ । ठाकुर पक्षका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि मूल पार्टीले उनीहरुको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भनेर सांसद पदबाट मुक्त गर्न सक्नेछ । त्यसपछि उनीहरुको सांसद पद रिक्त बनाइदिनु भनेर पार्टीले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्न सक्नेछ । र, महन्थ पक्षका सांसद पद रिक्त भएको घोषणा संसद सचिवालयले गर्नसक्छ ।
यादव पक्षमा उभिएका कार्यकारिणी परिषदका सदस्य महोमद इस्तियाक राई नयाँ दल गठन भएको सन्दर्भमा दल त्याग आकर्षित भइ सांसद पद गुम्ने दाबी गर्छन्। सनाखतपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यदि उहाँहरुले नयाँ दल बनाउनु भयो भने स्वतः दल त्याग आकिर्षत हुन्छ। दल त्याग गरेपछि सांसद पद पनि खारेज हुन्छ। यो प्रष्ट कानूनी हो।’
Previous Previous post: जसपा अब बाबुराम -उपेन्द्रको : महन्थ-राजेन्द्रले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने !
Next Next post: सरकारले किशोरकिशोरीका लागि ६० लाख फाइजर खोप ल्याउदै